Buluug buluug ah - dhagaxyo qaali ah - buluug corundum - fiidiyow
Safayr buluug ah
Tags Blue, Safayr
Ka iibso dukaanno safayr dabiici ah dukaankeena
Sapphire dabiiciga ah ee dabiiciga ah waa dhagax qaali ah oo qaali ah, noocyo kala duwan oo ka mid ah macdanta loo yaqaan 'corundum mineral', aluminium alxamdu (α-Al2O3). Caadi ahaan waa buluug, laakiin sapphires qurux badan oo dabiici ah ayaa sidoo kale ku dhaca jaalaha, guduud, oranji, iyo midab cagaaran, sapphires parti wuxuu muujinayaa laba midab ama ka badan. Midabka kaliya ee saf saf ah ma noqon karo waa casaan. Maaddaama midabka guduudka midabkiisu yahay casaan yahay, nooc kale oo corundum ah. Xariga midabka midabka leh ee midabka leh midabka midabka leh ayaa noqon kara mid loo yaqaan 'ruby ama safayr' iyadoo ay kuxirantahay goobta. Midabkan kaladuwan waxaa sabab u ah xaddiga walxaha ay ka midka yihiin birta, titanium, chromium, copper, ama magnesium.
Caadi ahaan, waxaan gooynay oo u xajinnay sapphires buluug dabiici ah sida dhagax gemstones oo waxaan ku xirtay dahab. Waxay sidoo kale noqon karaan isku-duubnaan loogu talagalay warshadaha ama ujeeddooyinka qurxinta ee boules kristal ballaaran. Sababtoo ah adkaanshaha cajiibka ah ee safuufa. 9 qiyaasta Mohs. Macdanta labaad ee ugu adag, ka dib dheeman markay tahay 10. Waxaan sidoo kale u adeegsannaa qaar ka mid ah codsiyada aan dabiici ahayn. Sida qaybaha indhaha ee elektiroonigga ah. Dariishadaha cimriga dheer. Qaylada kiristaanka ee Wristwatch iyo dhalmada dhaqdhaqaaqa. Iyo wareejinno elektiroonig ah oo aad u dhuuban. Waxay u egtahay ciribtirida qaybaha elektiroonigga ah-ujeeddo aad u gaar ah oo ujeeddo leh.
Midabka Gemstone waa shaashadda marka la eego ri'yadda, isweydaarsiga, iyo codka. Hue waa midabka cad ee dhagaxa dhagaxa ah. Dareemidu waxay ka hadlaysaa muuqaalnimada ama iftiinka dhalashada, miyirkiisu waa iftiinka mugdiga. Safiirada buluugga ah ayaa ka jira isku dheelitiryo kala duwan oo ah buluugyada hoose ee buluugga ah iyo kuwa sareba, heerar kala duwan oo tonan ah iyo heerar kala duwan.
Waxaan darfiyada fasalka ku nadiifinnaa nadiifintooda asaasiga ah. Tuulada labaad ee ugu badan ee laga helo safafka buluugga ah waa guduud, sidoo kale qalajin, iyo cagaar. Violet iyo purple wuxuu gacan ka geysan karaa quruxda guud ee midabka, halka cagaarna loo tixgelinayo inuu yahay mid aan fiicneyn. Safirada buluuga ah oo leh illaa 15% qalooc ama muraayad ayaa guud ahaan lagu sheegay tayada wanaagsan. Gray waa isbedelka isbeddelka caadiga ah ama maaskarka lagu helo safaashka buluugga ah. Gray wuxuu yareynayaa kulaylka ama iftiinka midhaha, sidaas darteedna wuxuu leeyahay saameyn aan caadi aheyn.
Midabka safafka buluug ah ayaa laga yaabaa in lagu sharaxo sida muuqaal dhexdhexaad ah oo mugdi ah si loo dhajiyo buluug. Halka mawjadaha hoose ee buluuga ah ay ugu yaraan tahay 85% iyo midabka labaad oo aan ka badnayn 15%. Iyadoo aan la yareeynin hoyga labaad ee cagaaran ama maaskaro adag.
Safir dahab ah oo dahab ah
Tags Gold, Golden, Safayr
Tags Safayr, Trapiche
Tags Safayr, xiddiga